Among Us2ပရောဂျက်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ InnerSloth – Gaming Noodle
Among Us2ပရောဂျက်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ InnerSloth
လက်ရှိ Twitch မှာရော ဂိမ်မာတွေအကြားမှာပါ ရေပန်းအစားဆုံးလို့ပြောရမယ့် Among Us ဂိမ်းရဲ့ Developer ဖြစ်သူ InnerSloth ကတော့ သူတို့ကြေညာထားတဲ့ Among Us2ကို Cancel လိုက်ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ပြီးခဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ InnerSloth ဟာ Among Us ရဲ့ အောင်မြင်မှုကြောင့် Among Us2ကိုထပ်မံထုတ်သွားမယ့်အကြောင်းကို ဩဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး တစ်လကျော်ခန့်အကြာမှာတော့ အဆိုပါပရောဂျက်ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရင်းကတော့ လောလောဆယ် Among Us 1 ကို အရူးအမူး အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ထုကြီးအတွက် ကစားရတာ ပိုမိုကောင်းမွန် အဆင်ပြေလာအောင် ဂိမ်းကို အစအဆုံး ပြန်ပြင် ပေးချင်တာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Among Us 1 ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကတည်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပြီး Developer တွေကိုယ်တိုင်က ဒီလောက်အထိအောင်မြင်မှုရလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့တာကြောင့် ဂိမ်းစတင်ရေးဆွဲကတည်းက အကျဉ်းချုံးပဲရေးဆွဲခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် Among Us ဟာ ပုံမှန် တစ်နာရီကိုကစားသမား အယောက် ၃၀ ကနေ ၅၀ ထိလောက်ပဲရှိခဲ့ရာကနေ အခုလို တစ်နာရီအတွင်းကစားသမား ၇၀၀၀၀ ကနေ ၁၁၀၀၀၀ လောက်အထိတိုးပွားလာတဲ့အခါမှာတော့ ဂိမ်းရဲ့လိုအပ်ချက်ဟာ ကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။ အစကတည်းက Among Us ကိုအကျဉ်းရုံးပဲရေးဆွဲထားတဲ့ Developer တွေအနေနဲ့ အဲဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဆိုရင် ဂိမ်းတစ်ခုလုံးကို အစအဆုံး ပြန်လည်ရေးဆွဲရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် Among Us 1 ကို Update ဆက်မပေးတော့ဘဲ Among Us2ကိုပဲအာရုံစိုက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပါ။
အခုအချိန်မှာတော့ အဲဒီလိုစီစဉ်ခဲ့တာတွေကိုအကုန်ဖျက်ပြီး မူလ Among Us ကိုပဲ Online Multiplayer အဆင့်မီတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်အောင် အစအဆုံးနီးပါးပြန်ပြင်ရေးဆွဲသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် InnerSloth က Among Us ကိုပြန်ပြင်ရေးဆွဲပြီးရင် ပါလာမယ့် Feature အသစ်တွေကိုလည်း ကြေညာသွားခဲ့သေးပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ –
Among Us ကစားသမားတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ Server ပြဿနာတွေကို InnerSloth Team က Forte ဆိုသူက အဖြေရှာနေပါတယ်တဲ့။ ဘယ်အချိန်မှာစင်းလုံးချောဖြစ်မယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်သေးပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းချင်း ပိုကောင်းသထက်ကောင်းလာအောင် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
2. Colorblind Support
Among Us မှာအရောင်တွေကိုမှတ်သားရတာဟာ အက္ခရာကျတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် Colorblind သမားတွေအတွက်တော့ ဒီဂိမ်းကစားဖို့က တော်တော်ကြီးကိုလွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်လည်း မကြာခင်မှာ Colorblind Support ကိုထည့်သွင်းပေးသွားဖို့ စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
3. Friend/Account System
Among Us ကစားသမားတွေအစကတည်းက လိုချင်နေခဲ့တဲ့ Friend/Account System ကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးသွားဦးမှာပါ။ တကယ်တော့ Developer တွေကိုယ်တိုင်က ဒီစနစ်ကို ထည့်ချင်ခဲ့ပေမယ့် ဂိမ်းရေးထားတဲ့ Codebase က Feature အသစ်တွေထပ်ထည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကို အရမ်း ခေတ်နောက်ကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့် လက်လျှော့ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဂိမ်းရဲ့ရှေ့ရေးကိုကြည့်ပြီး မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်သွားတော့မှာဖြစ်ပြီး အပြီးသတ်ဖို့အတွက်တော့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြာဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
The Skeld, Mira HQ နဲ့ Polus ဆိုပြီး Map ၃ ခုအပြင် နောက်ထပ် Map အသစ်တစ်ခုဟာလည်း ပရိသတ်တွေရှေ့မှောက်ကိုရောက်လို့လာတော့မှာပါ။ Map ဒီဇိုင်းကိုအခုမှစဆွဲတာဖြစ်ပေမယ့် Theme ကိုတော့ InnerSloth က နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Henry Stickmin ဂိမ်းရဲ့ Theme အတိုင်းရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Among Us ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမှ စတင်ရေပန်းစားလာတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်းမှာတင် အွန်လိုင်းကစားသမားအရေအတွက် ၁.၅ သန်းအထိတောင်ရရှိခဲ့တဲ့ ဂိမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကို PC မှာကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Steam ကနေ 5$ တည်းနဲ့ဝယ်ယူကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Mobile မှာတော့ အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ရယူကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။